Ikhazi Lesici - Gumzo
Yenza imininingwane ngawe ingabonwa muntu iphephe
Qalisa ukuxoxa ujoyine izingcogco ngamagama, ukukhuluma noma i-video endaweni ephephile. Sikhonela ukuqinisekisa ukuthi imibono yakho iyezwakala kodwa imininingwane ngawe ingabonwa ngabanye.
Sungula i-account yakho yamahhala
Awukalelwa isikhathi, nomanini! Khuluma uze wenele, uqede konke okushoyo.
I-Video kanye Nokukhuluma
Izindlela zethu zokuxoxa zikunika ithuba lokukhetha leyo ongathanda ukuyisebenzisa. Sinayo eyokubhala amagama ekamelweni lokuxoxa ekuyizona singakhokhelwa. Ngabe ufuna ukwengeza ukuxoxa? Vula ukukhulumisana ukuze uzizwele ubumnandi, noma enhle i-video eyi HD emakamelweni ethu.
Sinenqubomgomo eqinile nabaphathi abacinisekisa ukuthi izindlela zethu zokuxoxa ziphephile kanti futhi ziyathandeka ekubambeni imihlangano kanye nokuxoxa. Sinazo izindlela ezabesifazane, ezangasese kanye nezihloko ezithize ukuze uhlale uphephile unethezekile.
Kusebenzela e-Africa, okwama-Africa – ungakwazi ukuqhumana ngokushaya wazi ukuthi ucingo lwakho luqhunyaniswe kweminye imishina Esigodini sase-Sillicon noma Eshayina.
Ukushaya kwethu kusezingeni eliphakeme ngoba ukuqhumana kwakho akufanelanga kuhambhe inqnye yonke yomhlaba.
Izindlela zethu zokuxoxa ngezangasese ngokuphelele. UMshina wethu uqunisekisa ukuthi imininingwane yakho naleyo yokukuthinta ayitholwa ngabanye. Ukushaya kwethu ku-encrypted kusuka ekuqaleni kuya kosekugcineni ayikho iminyango engasemuva, kungakho ukuxoxa kwakho kungokwangasese ngokwakho wedwa. Sidinga ukwazi kabanzi ngabasebenzisi okwedlula abanye esiqhudelana nabo, kanti lokhu kukwenza uphephe, kodwa kuvala iminya kubantu abakha ama-account mbumbulu ngenhloso yokudala izinkinga.
Bhalisa ukuze uqale ukuxoxa
Noma ungene kwi-account yakho lapha
Sicela wazi ukuthi siyibenzisa lenombolo kuphela ekusunguleni ukuqinisekisa, i-account aphephile. Singeke nanini sinike abanye noma sithengise imininingwane ngawe noma siyenze ugaxekile.
Indlela esuhluke ngayo
Ezangasese | Inqubomgomo yama-Cookie | Inqubomgomo Wokubuyisela Izimali